Barrett Browne - Sinnaanta Caalamiga ah ee Helitaanka
Maamulaha Farsamada Sare, United States
Barrett Browne waa Maamulaha Sare ee Farsamo ee kormeeraya Voices for Peace (V4P), barnaamij ay maalgaliso USAID oo diiradda lagu saarayo la dagaallanka argagixisada rabshadaha (CVE) iyo dhisidda nabadda shanta waddan oo ku hadla Afka Faransiiska ee Galbeedka Afrika. Barrett wuxuu si dhaw ulashaqeeyaa kooxaha gudaha si ay usameeyaan ololeyaal fariin oo kale ah, kaas oo hoosta ka xariiqaya isla markaana ka careysiinaya sheekooyinka xagjirnimada ee kala qeybiya jaaliyadaha isla markaana kicinaya dhalinyarada nugul. Isaga ayaa sidoo kale ka shaqeeya xoojinta nidaamyada kormeerka iyo qiimeynta V4P, iyo inuu soo sheego saameynta barnaamijka.
Barrett ayaa sidoo kale maareysa hirgelinta mashruuc ay maalgaliso dowladda Switzerland oo ay maalgaliso CVE gudaha Chad, kaas oo loogu talagalay in lagu xoojiyo dadaalka V4P ee ku saabsan harada Lake Chadin iyo in lagu ballaariyo howlaheeda la tijaabiyay koonfurta dalka.
Kahor shaqadiisa EAI, Barrett wuxuu taageeray barnaamijyada ay maalgaliso USAID / Galbeedka Afrika iyo USAID / Xafiiska Waxqabadka Kala-guurka ee Cameroon, Nigeria, Chad, Burkina Faso, Mali, iyo Niger. Wuxuu sidoo kale iskaa wax u qabso kaga shaqeeyay hay'adda Peace Corps Volterser ee Cameroon intii u dhaxeysay 2011-2013.
Barrett wuxuu heystaa shahaadada koowaad ee dowladda iyo Faransiiska oo ka qaatay jaamacadda Texas ee Austin iyo shahaadada mastarka ee siyaasada amniga caalamiga ee Jaamacadda George Washington. Si aad ula xiriirto Barrett fadlan emayl ugu soo dir bbrowne@equalaccess.org.